Ijaji livune uDjokovic kwelemvume yokungena e-Australia
NGEMINYE yemibhalo ebizwakalisa ukungenami ngokuvinjwa kukaNovak Djokovic ngesikhathi etheleka e-Australia, lapho ezodlala khona kwi-AO kulandela ukuphucwa kwakhe iVisa Isithombe: BACKPAGEPIX
U-Novak Djokovic uyinqobile impi yokuqala emzameni wakhe wokuvunyelwa ukuthi angene e-Australia, ukuze avikele isisoco se-Australian Open yize engayigonyelwanga iCovid-19.
Lo mdlali okleliswe phezulu emhlabeni uphucwe amaphepha okungena e-Australia ngoLwesine olwedlule kodwa ngoMsombuluko ekuseni iJaji lakhona u-Anthony Kelly, likhiphe isinqumo sokuthi kumelwe abuyiselwe kuyena.
Leli jaji liphinde layalela uhulumeni wase-Australia ukuba ukhokhe izindleko zaleli cala futhi uDjokovic akhululwe esikhungweni abegonqiswe kusona.
Imithetho yase-Australia ayibavumeli abantu bangaphandle ukuthi bangene kuleliya lizwe uma bengagonywanga ngokuphelele, ngaphandle uma benencwadi kadokotela echazayo izizathu ezizwakalayo ezivimba ukuthi bagome.
Ngokwamaphepha ka-Djokovic, isizathu esenza angagonywa wukuthi usanda kutholakala negciwane le-Covid ngoDisemba 16, ngonyaka odlule.
Abameli bakhe bathi ngokwemihlahlandlela umuntu osekuqinisekisiwe ukuthi une-Covid ngokuhlolwa kohlobo lwe-PCR (Polymerase Chain Reaction) akudingeki ukuthi agome izinyanga eziyisithupha.
Umdlali wethenisi waseBrithani, u-Andy Murray, uthi indlela okuphathwe ngayo udaba luka-Djokovic izoba nomthelela omubi emdlalweni wethenisi nomqhudelwano we-Australian Open.
“Ngicabanga ukuthi wonke umuntu ushaqekile ngokwenzekile, uma ngikhuluma iqiniso,” kusho uMurray.
"Okokuqala, ngithemba ukuthi uNovak uphatheke kahle. Ngimazi kakhulu futhi nginobudlelwan obuhle naye.
"Okwesibili, indlela okwenziwe ngayo ibeka isithombe esibi ngomdlalo wethenisi babo bonke abantu abathintekayo kulolu daba."
UDjokovic nguyena ophethe irekhodi lezicoco eziningi ze-Australian Open njengoba esenqobe lo mqhudelwano izikhawu eziyisishiyagalolunye.
Njengamanje kubukeka sengathi usekhululekile ukuthi avikele isicoco sakhe kodwa uhulumeni wase-Australia usengamvimba ukuthi angene ngezinye izindlela.
Uma lokho kwenzeka, uzongena ohlwini lwabadlali abahamba phambili abangeke babe yingxenye yalo mqhudelwano kulo nyaka njengoSerena Williams nodadewabo uVenus, uRoger Federer, uStan Wawrinka, uDominic Thiem nabanye.